जब आफ्नो कोठामा बच्चा परिवर्तन गर्न को लागी आमाहरु आज
बच्चालाई आफ्नो कोठामा कहिले परिवर्तन गर्ने
एलिसिया टोमेरो | 12/10/2021 10:00 | सिक्ने, विकास, बच्चा, परिवार
धेरै आमाबाबुले निर्णय गर्छन् कि उनीहरुका बच्चाहरु कहिले आफ्नो कोठामा एक्लै सुत्न, तर उनीहरु अझै पनी जान्दैनन् जब बच्चा लाई आफ्नो नयाँ कोठा मा परिवर्तन गर्न को लागी। हामी धेरैलाई थाहा छ यो एक विकासवादी कदम हो र त्यो एक ठूलो तौल को कारण हो, किनकि हामीलाई थाहा छैन यदि यो परिवर्तन धेरै रात जागृति पैदा गर्न सक्छ।
धेरै प्रयासहरु असफल हुन अन्त जब आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको कोठा र परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्छन् बच्चा यो स्वीकार गर्दैन। निद्रा को कमी र अनिद्रा बाट पीडित को दैनिक यातना धेरै आमा बुबा यो मा दिने संगै समाप्त हुन्छ। अभ्यास गरिन्छ सह निद्रा. हामी विश्लेषण गर्नु पर्छ किन यो भएको छ र जब यो हाम्रो छोरा लाई परिवर्तन गर्न को लागी समय हो ताकि यी घटनाहरु नहोस्।
1 मैले बच्चालाई उसको कोठामा कहिले बदल्नु पर्छ?
2 कसरी हाम्रो बच्चा एक्लै सुत्न मद्दत गर्ने?
मैले बच्चालाई उसको कोठामा कहिले बदल्नु पर्छ?
थप हलचल बिना धेरै आमा बुबा को महान शंका छ, किनभने विभिन्न परिस्थितिहरुको लागी र कसरी सामूहिक जीवन घरमा छ, धेरै कारकहरु निर्भर हुनेछ यो परिवर्तन सिर्जना गर्न को लागी। स्तनपान को समयमा, एक महान बन्धन शिशु को लागी बनाईएको छ र त्यो यो प्रक्रिया लाई धेरै ढिलो गर्न सक्छ। यो किन भैरहेको छ?
किनभने आमा र बच्चा को बीच सिर्जना गरीएको छ एक सानो लगाव र निर्भरता को यो प्रकार यो समय को साथ अधिक र अधिक फिर्ता लिन्छ। यो सामान्यतया हुन्छ कि आराम को लागी बच्चा सुत्न को लागी नजिक छ र जब छाती माग्नुहोस् थप ado बिना प्रस्ताव गरीन्छ। यो तथ्य एक दिनचर्या बानी बनाउँछ र यो धेरै सजिलो वरिपरि भएको बनाउँछ र अर्को कोठामा सार्न छैन।
तर यो मात्र हो सबैभन्दा सामान्य उदाहरण मध्ये एक, कम से कम जब तपाइँ आफ्नो कोठा मा बच्चा सार्ने विचार गरीरहनुभएको छ र कहिले समय आउँछ थाहा छैन। तेसैले सह सुत्न को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ महिना देखि बर्ष सम्म, हुनसक्छ जब बच्चाले निर्णय गर्दछ कि उसलाई स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ।
त्यहाँ पुष्टि गर्ने डाटा छ एक बच्चा त्यो लगाव वा चिन्ता महसुस गर्न जाँदै छैन सात वा आठ महिना भन्दा पहिले छुट्टिएर। यो उथलपुथल हामीलाई बताउँछ कि त्यो उमेर भन्दा पहिले जब हामी ठूलो solvency संग उठाउन र प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो छोरा कोठा बदल्छ।
यो एक निर्णायक दृष्टिकोण हो र यो दुबै आमा बुबा र बच्चा को भाग बन्छ। यो योजना बनाउन को लागी समय हात मा आउँछ जब, परिस्थिति को एक श्रृंखला को कारण, हामी विश्वास गर्छौं हामी सबै तयार छौं। यद्यपि यो धेरै आमा बुबा को लागी यो जस्तो लाग्न सक्दैन, यो पल आउँदैन किनकि उनीहरु लाई सह निद्रा र सँगै रहन को लागी आवश्यक छ, किनकि उनीहरुलाई यो मन पर्छ। यो एक तथ्य हो कि धेरै घरहरुमा हुन्छ र धेरै परिवारहरु प्राय मौन हुन्छन्, तर यो वास्तविक हो।
कसरी हाम्रो बच्चा एक्लै सुत्न मद्दत गर्ने?
त्यहाँ रणनीति र ट्यूटोरियल को धेरै छन् एक संलग्न बच्चा एक्लै सुत्न। यो एक निर्णय हो कि धेरै आमा बुबा सबै को भलाई र बच्चा को लागी हुन चाहन्छन् तपाइँको आफ्नै स्वतन्त्रता छ। यो पक्का पनी थाहा छैन यदि दुबै सह-निद्रा वा बच्चालाई आफ्नै कोठा मा सुत्न को लागी घटनाहरु छन् कि सबै को लाभ को लागी प्रतिस्पर्धा गरीरहेछ। प्रत्येक यसको आफ्नै लाभ र हानि छ।
यदि बच्चा पहिले नै एक सानो पुरानो छ यो यो टी को लागी समय हो भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छमैले उसलाई उसको कोठामा सुत्न मूर्ख बनाएँ। यो शब्दहरु 'तपाइँ एक्लै सुत्न जाँदै हुनुहुन्छ' को उपयोग को एक प्रश्न होइन किनकि यो एक कट्टरपन्थी हुन सक्छ, तर हो मायालु यो नयाँ स्थिति मा छलफल.
यदि तपाइँ एक्लै सुत्न डराउनुहुन्छ बिछोड को कारण वा त्यहाँ अँध्यारो छ यो सबै सुन्दर शब्दहरु संग खुसी हुन सक्छ। यो ध्यान दिनुपर्छ कि त्यहाँ एक कोठा र अर्को को बीच मात्र एक सानो अलगाव छ, तर त्यो आमा बुबा अझै धेरै नजिक छन्। यदि त्यहाँ अँध्यारो को डर छ, एक सानो प्रकाश कोठा मा छोड्न सकिन्छ। नजिकैको भरिएको जनावर वा महान कम्पनी को खिलौने पनि बनाउँछ धेरै सुरक्षित महसुस।
जब तपाइँको बच्चा एक बच्चा हो, परिवर्तन को विचार अन्य दिशानिर्देशहरु संग काम गर्दछ। सानो हुनु परिवर्तन अधिक व्यावहारिक हुन सक्छ। स्थानान्तरण बिस्तारै हुन सक्छ, उसलाई बिस्तारै बिस्तारै कोठा मा बिछ्याउने र पालना र उसको वरिपरि सबै कुरा को लागी आफ्नो मोबाइल को लागी प्रयोग गरीरहेको छ। यी सानो रणनीति, समय र धैर्य संग तपाइँ बच्चा बनाउन सक्नुहुन्छ तपाइँको कोठा मा स्वतन्त्र बन्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आज आमाहरू » विकास » बच्चालाई आफ्नो कोठामा कहिले परिवर्तन गर्ने
मेरो बच्चा burp गर्दैन: यो खराब छ? म के गर्न सक्छु?
के गर्भावस्था मा प्रोटीन शेक को सिफारिश गरिन्छ?